आफैं कोरोना संक्रमित पो भएछु: डा. राजेन्द्र खनाल – Health Post Nepal
२०७७ असोज ८ गते १८:४५
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख मेसु डा. राजेन्द्र खनाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । खनालले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका छन्।
आफूलाई ज्वरो आएको र सुख्खा खोकी लागेको बताएका छन्। डा. खनालले आफू फिजिसियनको सम्पर्कमा रहेर अहिले होम आइसोलेसनमा रहेकाे बताएका छन्। डा. खनालले साथीभाई इष्टमित्र सबैलाई फोन कम गर्न र म्यासेज गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘हिजो रातिदेखि ज्वरो आउन सुरु गरेको छ,’ डा. खनाल भने, ‘मध्यरातमा सुख्खा खोकीले अप्ठ्यारो पारे जस्तो भयो, जीउ दुखेर भारी भएको छ।’
स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आएको कारण शंका लागेर बिहान पीसीआर टेस्ट गर्न स्वाब दिएकोमा पोजिटिभ रिपोर्ट उनले फेसबुकमार्फत बताएका छन्।
उनले लेखेको फेसबुक वाल जस्ताको तस्तैः
आफैं कोरोना संक्रमित बिरामी पो भएछु
दुई दिनअघि भर्खरै कोभिडका बिरामीको सेवामा लाग्ने भनेर कोरोना अस्थायी अस्पतालको लागि भनेर छनाेट भएकी एक जना नर्सिङ स्टाफले मलाई मेसेज गरिनु डाक्टर हजुरलाई थाहा छ कि छैन?
अहिले हामी १२ जना स्टाफ धागो कारखानामा भर्ना छौं। मलाई थाहा थियो-उनीहरुमाथिको मुख्य अस्पतालको आइसीयूमा ट्रेनिङको क्रममा संक्रमित भएका थिए।
तर, एक्सरे हेर्दा खासै समस्या नभएको र सामान्य लक्षण भेटिएपछि भर्ना गरिएको थियो। विशेष निगरानीमा राख्न।अहिलेको संकटमा सेवामा समर्पण गर्ने भनेर काममा आउनु ठूलो कुरा हो।
मैले मेसेज पाएपछि भने म तिमीहरूलाई भेट्न आउछु। चिन्ता नगर्नू, उच्च मनोबल राख्नू। अहिले समस्या भए भन्नू। म अस्पतालको प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएपछि अस्पतालका फांटहरुमा प्रायः नियमित रूपमा पुग्ने बानी छ। किन-किन अन्य कार्यालय प्रमुख जस्तो सही गर्दै बस्ने बानी मन पर्दैन।
तर बाध्यता छ, कहिलेकाही भ्याइँदैन। प्रशासन मेरो मन पर्ने क्षेत्र पनि होइन। राम्रो काम र परिवर्तनमुखि काम गर्दा पनि धेरैको तारो भइन्। अर्को दिन दिउसो म त्यहाँ गए। सबैलाई बाहिर बोलाए, सामाजिक दूरी राखेर कुरा गर्न भने, मास्कको उचित प्रयोगको बारेमा हवाइ जहाजमा एयर होसटेसले हरेक पटक उद्घोषण गरेर सम्झाए।
हातको सफाई बारेमा बुझाए । र, मायाले यी कलिला नानीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुनु भनेको कुनै आफ्नै हेल्चक्रायी हो भनेर गाली जस्तो गरे। मास्क फुकालेर बिरामीसंग कुरा गरेका थियौ कि?, मोबाइलमा आफू आफूहरु सेल्फी र टिकटक बनाउन नजिक भएका थियौ कि? हातको राम्रो सफाइ भएन कि ? सम्झाएँ।
फेरि भने स्हेर गोठमा गोबर सोत्तर गर्नेहरुलाई कहिलेकाही जत्ति गरे पनि आफूलाई लाग्न सक्छ। यो चाहिं दुर्घटना हो। त्यस्तो मलाई पनि हुन सक्छ। आज तिमीहरूलाई गाली गरेर पर्सि भयो भने कोहि छैन खट्ने र गर्नेलाई नै यस्तो हुने तर साबधानी अपनाम है।
न आत्तिनू, तिमीहरूलाई कोरोना फ्री गराएर हामीले काम दिनेछौं। उनीहरू मेरो काउन्सिल खुशि भए जस्तो लाग्यो। अहिले उनीहरुको स्वास्थ्य लाभ भइराखेको छ।
तर कस्तो संयोग हो कुन्नि ? हिजों रातिदेखि मलाई पो ज्वरो आउन शुरु गर्यो, राति मध्यरातमा सुख्खा खोकिले अप्ठ्यारो पारे जस्तो भयो, जीउ दुखेर भारी भएकोमा शंकाले बिहान पी सी आर टेस्ट गर्न स्वाब दिएकोमा पोजिटिभ रिपोर्ट पो आयो।
अहिले होम आइसोलेशनमा बसेको छु। बर्षमा खास गरी यो सिजनमा घांटी दुख्ने हल्का जीउ दुख्ने त प्राय हुन्थ्यो। कहाँबाट कोरोना घुस्यो,रनभुल्लमा छु। छिटै यसबाट पार पाएर काममा फर्किने छु।
म सँग गत ४– ५ दिनदेखि नजिक भएका कुनै पनि साथिहरुमा शंकाका लक्षण छन भने तुरुन्तै अस्पतालको फीबर क्लिनिकमा आई निशुल्क पि सि आर टेस्ट गराउनुहोला।
समस्या नभएकाहरु ५–७ दिनको सेल्फ आइसोलेशन तथा सरकारले भनेको, सामाजिक दूरी, मास्कको उचित प्रयोग , हातको सफाइमा को सुरक्षा कवचमा रहनुहोला र लक्षण निस्किएमा तुरुन्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको फीबर क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नु होला।
शुभेच्छुकहरुले मलाई धेरै फोन नगरिदिनुहोला, किन भने मलाई सुख्खा खोकीले आक्रान्त पार्दैछ। मेसेज जति गरे पनि हुन्छ ।तर सकारात्मक होस सजसले मलाई मनोबल उच्च पार्न सहयोग गर्नेछ , र म छिट्टै यहाँहरुको सेवामा हाजिर हुन पाउँ।